Radiator alimina alimina mora vidy no namoaka ny ozinina sy ny mpamatsy | Ouzhan
Fanamafisana ny profil radiator an'ny alimina alimina
Ny hatevin'ny sarimihetsika dia manodidina ny 1μm, izay mitovy amin'ny substrate. Ny fifamatorana dia matanjaka tokoa, izay mahatonga ny ambonin'ny fonosana hivezivezy ary manakana ny fihanaky ny otrik'aretina tsy hitohy. Noho izany, ny firaka aliminioma mihitsy dia tsy matahotra oksizenina, ary tsy misy harafesina oksizenina.
Ny firaka aliminioma dia manana sarimihetsika miaro oksida matevina eo amboniny, noho izany dia sarotra ho an'ny fikajiana anti-harafesina ny hanaraka. Na dia ampiharina aza dia mora ny mihintsana eo ambanin'ny fanasan-drano ao anaty ny radiator ny tsentsina manohitra ny harafesina amin'ny atiny anatiny amin'ny alimo aluminium. Noho izany, ny radiatera aliminioma alikaola dia tsy tokony hampiasaina amin'ny rafi-pampafana afovoany, fa tena mety amin'ny rafi-pampana-tena.
Aluminium firaka radiator dia manasongadina: noho ny famafana ny hafanana alimika, ny fitsipika anatiny manohitra ny harafesin'ny radiator
Ny fitsaboana anti-harafesina anatiny an'ny radiator dia ny manaloka ny atin'ny radiator miaraka amina sosona adhesion (adhesion) ary fanoherana ny harafesina.
Detaly manokana momba ny fitrandrahana alimina alimina alimina alimina
Previous: 6016 alimina alimina fitsaboana hafanana faritra machining CNC
Manaraka: Fitaovana fanodinana alimina vita amin'ny alimika